Greek Economy to Grow 2.8% In 2020 On Investment, Lower Taxes, Budget Projects | Myanmar Business Today
Home Business International Greek Economy to Grow 2.8% In 2020 On Investment, Lower Taxes, Budget...
Greece expects its economy to grow by 2.8 percent next year, driven by higher investments, improving domestic demand and tax cuts as the country recovers fromadecade-long debt crisis.
Data from the 2020 budget, formally submitted to parliament for approval on Thursday, also forecastaprimary surplus of 3.56 percent of gross domestic product next year, with debt falling to 167percent percent of GDP from 173.3percent this year.
Greece emerged from international bailouts supervised by its lenders in August 2018. But it still needs to meet fiscal targets, includingaprimary budget surplus – which excludes interest payments on its debt – of 3.5 percentof GDP up to 2022, which many consider unrealistic.
Corporate tax will be cut to 24 percent on 2019 profit from 28 percent currently and taxation on dividends will be halved to5percent.
Greece’s euro zone lenders project that Greece’s economy will remain resilient next year, forecasting 2.3 percent economic growth in 2020, more than the euro area average of 1.2 percent.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြာလာခြင်း၊ ပြည်တွင်း ဝယ်လိုအား တိုးတက်ခြင်း၊ အခွန်အကောက်များ လျှော့ချလိုက်ခြင်းကြောင်း နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် လာမည့်နှစ်တွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၂ဒသမ၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာမည်ဟု ဂရိနိုင်ငံက ခန့်မှန်းထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းအချက်အလက်များတွင် ပြည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးမှာ ၃ဒသမ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ကြွေးမြီမှာလည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က GDP ၏ ၁၇၃ဒသမ၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှာ ၁၆၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ဂရိနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် မြီရှင်များ၏ ကြီးကြပ်၊ ငွေချေးပေးမှုကြောင့် ပြန်လည်ဦးမော့လာသည်။ သို့သော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
ကော်ပိုရိတ် အခွန်များကို လက်ရှိ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကာ အစုရှယ်ယာအမြတ်ငွေများအပေါ် အခွန်များကိုလည်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ထက်ဝက်လျှော့ချမည်ဖြစ်သည်။
လာမည့်နှစ်တွင် အခွန်ငွေယူရို ၂ဒဿမ၄၄၅ ဘီလီယံ ရရှိရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
အဆိုပါ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းအနေဖြင့် လာမည့်နှစ် ကြွေးမြီဈေးကွက်ကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် တိကျသော အစီအမံများတော့ ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် ‘ကြွေးမြီထုတ်ပေးသူအနေဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားမည်’ ဟူသော နိုင်ငံတော်၏ ဗျူဟာကိုတော့ ဖော်ပြထားသည်။
SOURCEAthens Bureau (Reuters)
Previous articleFOREX-Dollar Steadies After3Days of Losses As Trade Deal Hopes Dim
Next articleAustralia Signs Critical Minerals Research Agreement with U.S.